Home Wararka Cashadii Gaarka Ahayd ee MW Farmajo iyo Xil. Fowzia X Aden Maxaa...
Cashadii Gaarka Ahayd ee MW Farmajo iyo Xil. Fowzia X Aden Maxaa looga Hadlay?
Cashada Khaaska ah: Cashadaas loo sameeyey Xil. Fowzia ee MW Farmajo waxay aad u hubeysay Xildhibaannada iyo inay indho la’aan oo xoog leh ugu ololeyso Nooca doorasho ee uu MW Faremajo rabo. Noocaan oo ah mid fududeynaya in lagu shubto taas oo uu rabo madaxweyne Farmajo 2020/21.
Ka Beensheega 4.5 ee Fowzia: Ma jirto in 4.5 uu xaq yahay cid ku doodeysan, laakiin cid kasta oo aan wareysanay oo ay ku jiraan xildhibaanada ku soo baxay, waxay leedahay waa in looga guuraa wax ka wanaagsan oo ah cod iyo qof dalka oo dhan ah.
Xildh. Fowzia oo isu muujisa inay difaaceyso si dedban damaca MW Framajo waxay ku gabbaneysaa inay ka soo horjeedo 4.5 oo ay rabto in laga guuro. Laakiin nidaamka ay rabto in looga guurayo waa mid ah in dadka hadda ku soo gala barlamanka 4.5 ayba soo gali doonin barlamanka. Waayo hadda kurisiga .5 lama duudusin karo oo qabiillada sheegta badnaanta ma qaadan karaan, laakiin marka qaabka ay Farmajo iyo Fowzia rabaan la aado ma soo galayaan barlamanka.
Tusaale waa kee xisbiga magacaabanaya inuu doorasho ku galo qabiillada yar qof ka socda oo uu hubo in laga guuleysan doono? Xisbi waliba wuxuu magacabaayaa qabiilka la leeyahay waa ku badan yahay degaankaas qof ka socdaa, waxaana dhaceysa in 10 xisbi ay soo kala magacaawdaan 10 qof oo isku reer ah maadaama la tuhmayo in beehaas ay degaankaas ku badan tahay kursigana ay iyadu qaadaneyso.
Dhinaca kale Xildh. Fowzia waxay aad uga soo horjeeddaa in kursigeeda la dhex dhigo beesha ay ka soo jeeddo waxayna rabtaa inay doortaan xoogga waddaniyiinta ama aanba barlamankan haddab joogaa la kala dirin laakiin la soo doortoo madaxweynaha iyo guddoonka Barlamanka MW Farmajana ay u cdeeyaan xildhibaannada hadda jooga haddii aan xoogga waddaniyiinta la heleyn.
Damaca Fowzia Xaji Aden: Cashada waxaa kaloo Xil.Fowzia loogu sheegay in la sameyn doono sannadka cusub isku shaandheyn golaha wasiiraadda si looga takhaluso dhowr qof oo uu MW Farmajo karaahsaday sida Khadija Diiriye, Mahdi Guuled iyo Axmed Ciise Cawad oo isaga dhowr jeer ka soo horjeestay amarro qalloocan oo uu Kheyre siiyey oo ahaa in xigtada Farmajo oo jagooyin badan loo magacaabay in lala simo beesha kheyre.
Xildhibaan Fowzia waxaa loo fuliyey hal dalab oo ahaa in gabadheeda lagu soo daro diblomasiyiinta Somaliyeed ayaa loo geeyey Safaaradda Somaliya ee Tanzaniya ay ku leedahay .
Waxaa soo baxaya Xildh. Fowzia Xaaji Aden ujeedada ay arrintaan ka leedahay tahay oo kalia dano shakhsiyadeed ee aan dal Iyo dad toona ka tarjumeyn, danahaas oo kala ah
In ay dhowr sano oo kale ay ku sii jirto barlamanka Somaliya si ay taariikh nololeedkeeda ugu darsato si ay ugu wareegto hay’adaha caalamiga ah ee QM iyadoo ka faa’iideysaneysa jagooyinka ay soo qabatay sida RW ku xigeen.
Iyadoo fahamsan awoodda uu leeyaay xafiiska RW ku xigeenka dalka oo ay horay u soo aragtay markii ay qabatay xelligii dowladihii MW Xasan Sheekh xafiiskan.
Xildh. Fowzia iyo Besha Caalamka: Xildh.Fowzia waxay shalay kulan khaas ah la qadatay Madaxda AU/Amisom, kulankaas oo la aminsan yahay inuu u qaban qaabiyey fekerkana u dhiibay MW Farmajo. Waxay si buuxda uga digtay inaysan suuragal ahayn in la qabto doorasho qof iyo cod xaaladda dalku ku sugan yahay darted loona baahan yahay in laba sano loo kordhiyo Farmajo, walow aysan sheegin cidda xaaladdan khaterta ah ka mas’uul ah. Waxaasa meesha ka sheegay mid ka mid ah mas’uuliyiintii ay la kulantay waxaana shaki la geliyey in xataa haddii loogu daro laba iyo wax ka badan ay wax qaban karto dawladdaan hadda jirtaa.
Fowzia waxay shegtay, si loo helo waxqabad dhab ah muddadaas inay la badalayo Kheyre oo la keeni doono qof wax qaban kara, iyadoo hadalkaas laga fahmay inay kheyre iyo Farmajo kala tageen.
Waxaa kaloo ay MOL helysaa xog ah inay dhowr jeer codsatay inay la kulanto safaaradda Mareykanka walina aan jawaab iyo ballan toona loo qaban, balsa ay madaxtooyada ka shaqeyneyso in ballan looga qabto safaaradda Mareykanka.
Haddaba arimahaan oo dhan waxay u muujinayaan inay xildh. Fowzia ku bixineyso inay geed gaaban iyo mid dheerba u fuusho inuu MW farmajo ku sii nagaado talada dalka muddo dheer oo kale oo runtii xanuun badan xataa ina la suureysto dhowr bilood oo kale oo Farmajo uu dalkaan sii dumiyo.
Dhinaca kale, mucaridka dalka oo aan u muuqan inay yihiin kuwa leh ilko adag oo ay beesha caalamka la shaqeyn karto isla markaana ku dirqin kara inay mowqif cad ka qaataan dawladdaan ay ku dul biilayaan inay sii baabi’iso wixii muddada dheer lala soo dhisayey besha caalamka, kuwaas oo u muuqda in la soo gaaray xelligii ay shacbiga Somaliyeed ka tashan lahaayeen wixii laga yeeli lahaa dowladdan iyo beesha caalamka oo isku dan noqday una muuqada kuwa raba in Somaliya sidaan lagu sii hayo.